''ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခွင့် ရပြီဆိုတော့ ပရိသတ်တွေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ဆုတွေလည်းရအောင် ကြိုးစ?? - Yangon Media Group
”ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခွင့် ရပြီဆိုတော့ ပရိသတ်တွေဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ဆုတွေလည်းရအောင် ကြိုးစ??
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းရော ပရိသတ်တွေဆုတောင်း ပေးတာကြောင့်ပါ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးခွင့် ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ သရုပ်ဆောင် အောင်ရေချမ်းက ပြော ပါတယ်။ ”ကျွန်တော်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ရုပ်ရှင်နယ် ပယ်ကိုသိပ်ပြီးတော့မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဇာတ်လမ်း တွဲရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာပဲ အချိန်ကုန်တာများပါတယ်။ ဇာတ် လမ်းတွဲမှာ ပရိသတ်တွေအားပေးခဲ့တာကြောင့် တော်တော် လည်း ဝမ်းသာရပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ရော ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေဆုတောင်းပေးတာကြောင့် လည်း အခုလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ပြီဆိုတော့ ကိုယ် တိုင်က အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ ပရိသတ်တွေ ဖြစ် စေချင်တဲ့အတိုင်း ဆုတွေလည်းရအောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ”လို့ သူကပြောပါတယ်။
အောင်ရေချမ်းဟာ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူးနေတဲ့ ”ဇာတ်လိုက်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ”ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာကတော့ ကျွန်တော့်ကာရိုက် တာက ပထမပိုင်းမှာဆိုးတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒရာမာပြန်ချိုးမယ့်ပုံစံလေး ဖြစ်ပါ တယ်။ ကာရိုက်တာအတွက် ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းလေးက တော့ ဇာတ်ကိုသေချာဖတ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားပိုင်း ကိုတော့ ဒီဇိုင်းနာနဲ့ သေချာအပ်ပြီးတော့ ချုပ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်နဲ့ သေချာလေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဆို ပါတယ်။
”ဇာတ်လိုက်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ မြင့်မြတ်၊ မေမြင့်မိုရ် တို့နဲ့အတူတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးခဲ့ရာကနေ ပရိသတ်အား ပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့အတွက် ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးတာနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူး တဲ့အခါတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကွာ ခြားမှုရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း အခုလိုပြောပါတယ်။
”ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့သရုပ်ဆောင်ရတဲ့အ ပိုင်းတွေ သိပ်မကွာဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကတော့ နှစ်နာရီကျော်စာလောက် ပြရတာမျိုးဖြစ်တာကြောင့် ပိုမြန် တယ်။ ရုပ်ရှင်ကျတော့ ကာရိုက်တာကို အာရုံစိုက်ရတာ ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ပထွေးရဲ့ အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ အယ်လန်ဒီဂျန်နာ
ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရယူပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဒေါ့မွန်မှ စတိုဂါ ထွက်ခွာမည်